Ihe ohuru ohuru IPX7 Waterproof Vibration Bullet 9 Speeds Remote
Oh wow na-achikota ya. Obi dị m ezigbo ụtọ na m nyere iwu maka ihe a ọ bụghị naanị na ọ bịakwutere m n'oge kwesịrị ekwesị kamakwa ọ na-eme ka ime ụlọ ahụ dị ụtọ. Ọ dị mfe iji m juru m anya na ọkwa vibration dị iche iche na di m hụrụ n'anya iji ya mee ihe. Ọ bụ nnọọ mgbanwe na m hụrụ n'anya na agba ọ bụ nnọọ ike ma ọ bụghị naanị stiif ya mere ọ na-akpali m ahu na m hụrụ n'anya na mmetụta.
G spot Bụ aha zuru oke maka ya n'ihi na ọ bụ n'ezie kụrụ m lol. Ọ bụrụ na ọ dị karịa ya, ọ ga-amasị m ịnweta karịa. Naanị ihe ọ na-efu bụ na echere m na ọ ga-adị jụụ ma ọ bụrụ na ọ na-enwu gbaa n’ọchịchịrị ma ọ bụ na-agbanwe agba ya.
Agaghị m azụ nke m maka ụwa emesịrị m chọta egwuri egwu mụ na di m hụrụ n'anya iji. Ọ dị oke mfe ihicha. M na-eche na m kwesịrị ịtụ ihe ụmụaka si a ụlọ ọrụ na-ere ákwà dị ịtụnanya ọ na-eri na ogwe aka na a ụkwụ dị ka nza nke ụmụaka ji egwuri egwu m natara n'oge gara aga
Nkebi Nke TL-B03 rọketi
Nkọwapụta Customizable ọrụ wireless remote
Ihe onwunwe ABS na silicone ahụike
Agba Black / Red, customizable
Ngwugwu agba igbe nkwakọ, customizable
Batrị Batrị batrị batrị 3.7V / 200mAh nwere ike ịgba
Oge ọrụ 1.5h
Nha 73mm (L) * 35mm (W) * 30mm (H) Nke a
Ibu ibu 65g
.Kpụrụ 9 Oké ịma jijiji
.Dị Ime akara gbasara ike butt plọg nwoke na nwanyị ji egwuri egwu
Max Noise Erughị 40dB
Asambodo OA, RoHS, FDA
Kwụ ụgwọ T / T, Western Union na Paypal
1.Anatomically Perfect na Aesthetically Mara mma Na Design 2.The Roket Bullet Ezubere ka be Kwekọrọ n'Ozizi ọ bụla ysmụaka na Ngwa
3.Powerful Motor na rechargeable batrị 4.9 ntọala dị ike nwere ike ịnapụta azụ arito na njedebe nke njedebe.
5.Ọsọ ọsọ na-akwụ ụgwọ maka awa obi ụtọ
Nke gara aga: New imewe wireless remote toy toy mini vibrating nsen Clitoral vibrator massager bullet vibrator
Omume siri ike nke okenye okenye Sexmụaka ụmụaka ...
wireless wearable clitoral okenye mmekọahụ toy inyom ...
Automatic Erotic Adult amụ Head Dị Ike Av V ...
Ike nwanyi orgasm onuara ịhịa aka n'ahụ vibrators ...
Hot Sale Medical TPE Big amụ Nnukwu Realistic D ...
Postmụ nwanyị Nwanyị Nwanyị Nwanyị Mmekọahụ Mmekọahụ T ...